I-Sohonet yokuqalisa i-App yeVidiyo yeVidiyo ye-AppleV-I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi oMiselweyo weNAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » iindaba » I-Sohonet yokuQalisa iVidiyo yeVidiyo yeVidiyo ye-Apple
I-Sohonet yokuQalisa iVidiyo yeVidiyo yeVidiyo ye-Apple
Sohonet, iingcali zehlabathi kukunxibelelana, iinkonzo zeendaba kunye nokhuseleko lwenethiwekhi kumaziko eendaba nakwezolonwabo, iza kupapasha i-OpenView Flex App yeApple TV kule-Okthobha. Itekhnoloji entsha iya kuqwalaselwa kwi-2019 IBC Show eAmsterdam ukusuka ngeSep 13-17, kwiSohonet Boat.
ClearView Flex sisisombululo sentsebenzo ekude esisebenzayo esikwaziyo ukusasazeka kuyo nayiphi na ifowuni sineefreyimu ezimbini zokulibaziseka, eziyilelwe ukujikeleza kweendaba zanamhlanje ngokhuseleko olufunwa zii-studio. Inkqubo entsha, efumanekayo kubathengi be-OpenView Flex Pro, iya kongeza kwizixhobo ezixhaswayo esele zibandakanya iilaptops (iMac kunye nePC), iifowuni kunye neetafile (i-iOS kunye ne-Android). Uhlelo lokusebenza luya kufumaneka ukukhuphela simahla kwiVenkile ye-Apple TV app, kwaye isikhombimsebenzisi sayo esilula asiyi kufuna uqeqesho
"Siphendula kwiimfuno eziguqukayo zabathengi bethu," utshilo umphathi we-Sohonet u-Chuck Parker. "I-clearView Flex App iza kubonelela abathengi bethu abaxakekileyo yenye indlela ekhuselekileyo yokujoyina iiseshini ze-CVF kwiziko, kwikhabhathi, okanye ukusebenza studio sabo ekhaya. Cacisa iFlex yokubanika amandla okuba basebenze ukuba bafuna phi kwaye bafuna ntoni, kwaye iApple TV app ihambisa amava akumgangatho ophezulu kunye nosetyenziso olulula lokusebenzisa iTV. ”
Ukulungiselela idemo kwi-IBC, cofa Apha. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-app okanye i-Sohonet, tyelela www.sohonet.com.
Ignite Communications Strategy
Izithuba ezandwendwe nge-Ignite Communications Strategy (ndinibone nonke)
Abafazi kwiTekhnoloji yeLuncheon ukuya kuFaka umlingisi weFilmaker kunye no-Creative Pamela B. Green - Oktobha 14, 2019
I-American Society ye-Cinematographs Inika amabhaso abaFundi - Oktobha 14, 2019
Iindidi zoNyulo loTyando lweMbasa ye-2019 ye-HPA Yabhengezwa - Oktobha 1, 2019
i-aple tv IBC SoftAtHome, MStar, iCES2017 Sohonet i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC TVU Networks I-Ultra HD Forum	2019-09-11
Previous: UDalet ubeka uPatricio Cummins njengoMphathi Jikelele weDalet Asia-Pacific
next: I-Avid Debuts UkuVuselelwa kweMveliso kunye neeSisombululo sokuThunyelwa kokuThunyelwa kwabaThumeli beVidiyo kunye neeVidiyo kuMxholo we-IBC2019